Lithuania kuzivisa mamiriro enjodzi pamuganhu weBelarusian pamusoro pekupinda kwevatorwa zvisiri pamutemo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Lithuania Kupwanya Nhau » Lithuania kuzivisa mamiriro enjodzi pamuganhu weBelarusian pamusoro pekupinda kwevatorwa zvisiri pamutemo
Belarus Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • Lithuania Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Lithuania kuzivisa mamiriro enjodzi pamuganhu weBelarusian pamusoro pekupinda kwevatorwa zvisiri pamutemo.
Zvinoenderana nemaitiro aripo, mamiriro enjodzi anogona kuziviswa neSeimas (paramende) pachikumbiro chehurumende.
Hurumende yeHurumende yeEmergency inotarisirwa kuziviswa kweinenge mwedzi mumwe chete.
Nhamba huru yevanoenda kune dzimwe nyika zvisiri pamutemo vanotungamirirwa uye vanobatsirwa nevakuru veBelarusian vachiedza kuyambuka muLithuania.
Nyika dzeEuropean Union dzinopomera Minsk kuwedzera kwemaune kwedambudziko uye inodaidzira zvimwe zvirango kuBelarus.
Hurumende yeLithuania, pamusangano wanhasi, yakazivisa kuiswa kwemamiriro ekukurumidzira mumatunhu ari kumuganhu neBelarus yakavakidzana nekuda kwemafashama evatorwa zvisiri pamutemo, vachitungamirirwa uye kutsigirwa. Belarusiann zviremera, vachiedza kuyambuka bhodha zvisiri pamutemo kupinda EU Baltic state.
"Sarudzo yakaitwa tichifunga nezvekuwedzera kwemamiriro ezvinhu munharaunda yemuganhu, tiri kuendesa kuti paramende itenderwe," Mutungamiriri wehurumende Ingrida Simonyte akadaro. Zvinoenderana nemaitiro aripo, mamiriro enjodzi anogona kuziviswa neSeimas (paramende) pachikumbiro chehurumende.
Zvinoenderana nechikumbiro cheBazi rezvemukati menyika, mamiriro enjodzi achange achishanda kutanga pakati pehusiku munaNovember 10 munzvimbo yemuganhu uye mukati memakiromita mashanu kubva kwairi pamwe nenzvimbo dzekugara dzevatorwa vanobva kunyika dzeAfrica neAsia avo. yakapinda muLithuania kuburikidza neBelarus.
Zvichakadaro, Chiberaruzi mudzvanyiriri Alexander Lukashenko akataura neChipiri kuti anofunga kuti vamwe vanotama vanogona kutarisirwa kubva kuAfghanistan munguva pfupi.
Maererano naLukashenko, vanobva kuAfghanistan vasvika Bherarusi kuburikidza neCentral Asia republics uye kuburikidza neRussia.
Vanotama zvisiri pamutemo vanorairwa nekukurumidza uye dzimwe nguva vanoperekedzwa Zviremera zveBelarusian kumiganhu yePoland neLithuanian.
European Union nyika dzinopomera Minsk kuwedzera nemaune kwedambudziko uye kudana mamwe masanctions kuBelarus.
Mamiriro ezvinhu pamuganhu wePolish-Belarusian akawedzera zvakanyanya nemusi weMuvhuro, apo zviuru zvakati zvevakatamira zvakasvika kumuganhu wePoland. Vamwe vavo vakaedza kuputsa ruzhowa rwewaya ine minzwa ndokupinda muPoland. Vachengetedzi vemitemo vekuPoland vakashandisa gasi remisodzi kumisa vatami.